စက်မှုလုပ်ငန်းထုပ်ပိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အဝတ်စုံ , အလှကုန်လိုပဲ,ကစားစရာ,အီလက်ထရောနစ်,လက်ဆောင်,အစားအစာ,အလင်း,ဆပ်ပြာ,ရောင်းချသည် .... ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာပြုလုပ်သောစက်၏အကူအညီဖြင့်သင်၏အတွေးအမြင်များကိုတကယ့်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်လာစေလိမ့်မည်. ပစ္စည်း · အင်္ကျီအနုပညာစက္ကူ(200gsm-600gsm) · offset စက္ကူ (200gsm-600gsm) · Kraft စက္ကူ (200gsm-600gsm) · စက္ကူအမည်းရောင် (200gsm-600gsm) အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်အရောင်များမည်သည့်အရောင်မှမရရှိနိုင်ပါပုံစံကို…
လက်ကားထုံးစံအလွတ်ဗလာ lipstick စက္ကူထုပ်ပိုးသေတ္တာများ
လွတ်လပ်သော R ကိုအတူ&D အသင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွေးအမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်. ဤအတောအတွင်း, ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးမဆိုထုပ်ပိုးသေတ္တာများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. စက်မှုထုပ်ပိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အဝတ်စုံ , အလှကုန်လိုပဲ,ကစားစရာ,အီလက်ထရောနစ်,လက်ဆောင်,အစားအစာ,အလင်း,ဆပ်ပြာ,ရောင်းချသည် .... ကုန်ပစ္စည်းအမည်လက်ကားဆန်ဆန်အလွတ်ဗလာနှုတ်ခမ်းနီစက္ကူထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာများအမျိုးအစားစက္ကူသေတ္တာများအရွယ်အစားအားလုံးအရွယ်အစားများရရှိနိုင်သည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်စက္ကူကုန်ကြမ်းများစစ်ဆေးရန်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများ, မင်, ကော်, စသည်တို့. စက္ကူ…
မိတ်ကပ်အတွက် mascara ထုပ်ပိုးသေတ္တာသေးသေးလေးကိုခေါက်နေသော CMYK စက္ကူအသစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေအရောင်းအဖွဲ့သည်သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုကူညီရန်စောင့်နေသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်နမူနာသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုဖြစ်လိမ့်မည်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ကုန်ပစ္စည်းအသစ်အတွက်မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများအတွက် Mascara ထုပ်ပိုးသေတ္တာငယ်တစ်ခုကိုခေါက်ထားသည့် CMYK စက္ကူ, တောက်ပ / Matt အနုပညာစက္ကူ, သစ်သားအခမဲ့စက္ကူ, CIS ကဒ်, အဖြူရောင်ကဒ်,အနုပညာစက္ကူ, ဆင်စွယ်ဘုတ်အဖွဲ့, စက္ကူ coated,အထူးစက္ကူစသည်တို့ကိုပုံနှိပ်ခြင်း, PMS , အနက်ရောင် &အဖြူရောင်အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း. ပြီးပြည့်စုံသောခညျြနှောငျခညျြနှောငျ , အပ်ချုပ် &ကော်, ကုန်းနှီးချုပ်, အမှုနှင့်စပ်ဆိုင်သော. W-O binding , လိမ်လည်ပတ်သည်